मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? ख्याल गर्नूहोस् तपाईंको मत बदर हुनसक्छ! :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? ख्याल गर्नूहोस् तपाईंको मत बदर हुनसक्छ!
कसरी हाले बदर, कसरी हाले सदर?
आज बिहान ७ बजेदेखि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मत खेर नजाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भोट हाल्दा केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २९, २०७९, २०:४०:००